Al-shabaab oo weerar miinooyin ah ku qaaday ciidamada Kenya ee ku sugnaa deegaanka Lamu - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo weerar miinooyin ah ku qaaday ciidamada Kenya ee ku sugnaa deegaanka Lamu
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Lamu oo ku dhaw xuduuda dalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar miino ah lala beegsaday ciidamo ka tirsan militeriga Kenya, iyadoona weerarkaas uu ka dhashay dhimashada 1 askari iyo 5 kalena oo dhaawac ah.
Weerarkaasi ayaa sidoo kale burbur aad u xoogan gaarsiiyay gaari noociisu yahay kuwa gaashaaman oo ay wateen ciidanka militeriga Kenya, waxaana ciidankaasi ee qaraxa lala eegtay la sheegayaa in xilligaasi ay ku howlanaayeen dhisida jid-cadde ee deegaanka Lamu.
Waa weerarkii ugu horeeyay oo ciidamada Kenya lagula beegsado deegaanka Lamu, iyadoona ciidamadaasi weerarka lala eegtay ay sheegeen in kooxda Al-shabaab ay weerarka u adeegsadeen miinooyin dhulka lagu aasay.
Dhinaca kale, Al-shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Kenya, iyagoona sidoo kale sheegay inay gubeen 4 ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamankaas.
Ugu dambeyntii, saraakiil ka tirsan booliska Kenya ayaa laga soo xigtay in qaraxyada ay gaarayeen labo qarax oo loo adeegsaday miinooyin dhulka lagu aasay ah.